चितवन मेडिकल कलेजले गर्‍यो ६ जनामा कलेजो प्रत्यारोपण, कस्तो छ बिरामीको धारणा ? - Narayanionline.com Narayanionline.com चितवन मेडिकल कलेजले गर्‍यो ६ जनामा कलेजो प्रत्यारोपण, कस्तो छ बिरामीको धारणा ? - Narayanionline.com
चितवन, जेठ २८-
कलेजो प्रत्यारोपणपछि जाजरकोटका भरतविक्रम शाहीले पुनर्जीवन पाएका छन्। नेपालमै आफूले कल्पना गरेभन्दा उच्चस्तरको उपचार विधि देखेर उनी दंग परेका छन्।
सुरुका दिनमा बाँचिएला भन्ने कम आशा बोकेका जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका–९ निवासी शाही अहिले तन्दुरुस्त छन्। अहिले पूर्ववत् रुपमा आफ्ना काममा जुट्न सक्ने भएका छन् उनी।
‘कलेजोको सिरोसिस भएपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छु भन्ने लागेकै थिएन,’ शाहीले भने, ‘अहिले नयाँ जीवन पाएको अनुभव गरेको छु। मेरो पुनर्जन्म भएको छ। यो खालको जीवन पाउँला भन्ने सोचेको पनि थिइन्।’
शाहीले अहिले स्वास्थ्य मात्रै राम्रो पाएका छैनन्, पूर्ववत् अवस्थामा नियमित काम गर्नसक्ने भएका छन्।
कलेजो रोग लाग्ने सुरुआती चरणमा खुट्टा, पेट फुल्ने, कहिलेकाहीँ ‘फेन्ट’ ९चक्कर० होला जस्तो हुने, एकोहोरो हुने, आफ्नै दिमाग ठीक छ कि छैन जस्तो हुने लक्षण देखिएको उनको अनुभव छ।
त्यतिबेला पेट फुलेर आफैँलाई लाज लाग्ने खालको भएको उनले बताए। शाहीको विसं २०७८ फागुनदेखि नै कलेजोमा समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि भारतको लखनउ गएर तीन पटकसम्म परीक्षण गराएका शाहीले जाजरकोटबाट १५–१५ दिनमा लखनउ जानुपर्ने बाध्यता थियो।
आफूले पाएको नयाँ जीवन शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै सामाजिक क्षेत्रमा बिताउने उनको योजना छ। कलेजो बिग्रिएकालाई समयमै प्रत्यारोपण गर्न उनले सुझाब दिए।
‘समयमै प्रत्यारोपण गरियो भने खर्च पनि कम हुन्छ । जीवन पनि सफल हुन्छ, बाच्न सकिन्छ । प्रत्यारोपण गर्न डर मान्यो भने खर्च उत्ति नै हुन्छ, परीक्षण गर्न गइरहनुपर्छ । औषधि खाइरहनु पर्छ,’ शाहीले भने।